jacob zuma oo is Casilay (dhegayso) – Radio Daljir
jacob zuma oo is Casilay (dhegayso)
Febraayo 15, 2018 7:02 b 0
Madaxweynaha dalka Koonfur Africa Jacob Zuma oo maalmahan danbe cadaadis dhanka Siyaasada ah heystay ayaa xalay khudbad Qaran uu ka jeediyay Telefishinka ku dhawaaqay inuu is casilay.
Madaxweyne Zuma waxaa heystay Cadaadis uga imaanayay xubnaha xisbigiisa ANC.
“ Waxaan halkaan u imid go’aan ah inaan is casilo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan,” ayuu Mr. Zuma ka sheegay magaalada Pretoria.
Jacob Zuma ayaa xilka Madaxweynaha Koonfur Afrika soo hayay tan iyo 2009, waxa uuna wajahayaa eedo dhowr ah oo musuq maasuq.
Iscasilaaddiisa ayaa waxa uu Zuma ku soo beegay dhammaadka khudbad dheer oo uu ku sheegay inuu aad uga soo horjeedo qaabka xisbiga ANC isaga ula dhaqmay.
Ciidanka Badda Somaaliya oo ka qayb galaya Dhoolatus Caalami ah